Yakatumirwa ne Tranquillus | Feb 24, 2018 | Kunyora uye kunyora unyanzvi hwokukurukura
Zvakakwana mazwi ako akanyorwa neOrdididact method
Waiziva here kuti unyanzvi hwekupereta hwaizivikanwa zvikuru nevashandi? Kudzidziswa mumutauro wechiFrench kunokosha kuti uwedzere mikana yekuwana basa. Kuburikidza Orthodidacte nzira, unogona kuvandudza kuvapo kwako kunyora nokudzidza zvose kupfuura yakaoma mitemo yacho kuti kwete tinokanganisa wokuita zvemusika yako neposvo. Uku kazhinji zvinoratidza kukomba mushandi, zvinokosha kuti kurapa mupiro wako uye unakidzwe nemashoko.
Kukosha kwekushandura muFrench yakanyorwa munyika yebasa
Mutemo wakakwana wemutauro wechiFrench nhasi uno chinhu chinokosha mumamiriro ekudzidzira. Kuvandudza kupereta kwako hakusi kwakaoma sezvinoratidzika. Mukuwedzera, ndiyo nzira yakanaka yekuita kuti unakidze kune makambani mazhinji kumativi ose emaindasitiri.
Chero basa raunoshandisa, unyanzvi hwako hwemutauro huchakurumidza kusiyanisa kubva kune vamwe vakagadzirira. Zvose zviitiko zvinoshushikana nekunetseka uku kwekunzwisisa, izvo zvinowanzoratidza kusakosha kwesangano. Imwe musinganzwisisiki, uye ndeye kutendwa kwekodhi yose inotora hit! Tichifunga nezvechokwadi ichi, zvingava zvinonakidza kuva nehutauro hwako hweFrance, hwakanyanya kana huri rurimi rwaamai vako.
Nzira yeOrdididact inodzidza iwe pachako
Pasinei nokuti munhu ane ruzivo rwepelenzi yekuita, kana achitaura nenzira yakaipa kuti aparadze shoko rimwe nerimwe rakaoma, mudzidzi wose achawana nzvimbo yake paOrdididact. Munhu wose anogona kudzidza pachedu pachake pasina kushungurudzika. Vose vane maitiro evanhu. Izvi zvakakwana kune avo vanoda kuve nemapurofesa mudzidzisi nokusingaperi mumusoro wavo.
Kudzidzisa kunokonzerwa neOrdididact nzira inoita kudzidziswa uku kwakagadziridzwa kwakakwana kwekuyananisa dyslexics nemashoko akanaka echiFrench. Izvo zvinotarisirwawo kuvadzidzi vane dambudziko rekutaura mukunyora. Orthodidact inovapa purogiramu pamatauriro avo, kusimbisa ruzivo rwavo nekuvandudza mazwi avo neshoko rimwe chete.
Ita zvisizvo zvinetso zvemutauro wechiFrench
Iwe hauzombodi kutarisa spell kuti uzive nzira yakarurama yokugadzirisa zviito. Izvo zvinyorwa zvezvibvumirano zvekare zvakabatanidzwa uye zvimwe zvisizvo zvekutaura kwako mutauro hazvichazove zvakavanzika kwauri. Kana uchida spelling and grammar upgrade, Orthodidact ndiyo mhinduro kumatambudziko ako ose. Kuvonga kuchinja uye kukwana kudzidza kure, unogona kuvandudza unyanzvi hwako hwokuverenga.
Izvo hazvina kumboitika kunonoka kudzokorora iyo yakakosha uye tekinoroji mitemo yeFrench girama. Iyo puratifomu inokupa iwe makosi pane akakosha zvakanyanya zvidzidzo. Nekudaro, iwe unowana jumble yemakosi kuti usambofa wakakanganisa kupaza, kana kunyange vamwe kumisikidza syntactic otomatiki. Izvi zvinokutadzisa iwe, mune ramangwana, kubva mukuita zvakakomba uye zvinowanzoitika zvikanganiso zvawakagara uchiita.
Kunaka ruzivo rwake mumutauro weMolière
Usazvivharira kungoziva kungoziva mutauro wechiFrench wemazuva ano! Izvishandise, uye uzviise mumakirasi emitauro yakazara kuti udzidze kutora maFrance neunyanzvi uye hunyengeri. Kutenda kumadzidzisi akawanda kuti uwedzere ruzivo rwemazwi ako uye uvandudze mutauro wako, Orthodidact inokusimbisa kukura kunoshamisa kwehupfumi hwemashoko ako.
VERENGA Ndeupi rudzi rweruremekedzo rwekutumira kutenda mune email yehunyanzvi?
Gadzirira kuzviratidza uchiridza uye unofadza zuva rega rega pakurumidza kuputika! Masangano anopiwa pachikuva akakodzera chaizvo kana iwe uchida kutanga mutauro weFrench. Izwi ramashoko nhasi nderokuratidza kwoupfumi hwepfungwa. Kudzidza mazwi matsva kuchawedzerawo ruzivo rwako rwemaxical uye semantic. Izvozvi, saka, zvichida hapana chinhu chinorasikirwa, uye zvinhu zvose kuti zviwane.
Kudzidzira paIndaneti kubatsira munhu chero upi zvake achivandudza kupora kwavo.
Nzira yeOrdididact ndiyo inodzidziswa paIndaneti. Somugumisiro, hazviitiki munzvimbo nechiso. Chinangwa chayo ndechekukubatsira kuti uzadzise zvese zvese zvemashoko ako. Nheyo yakasimba yepuratifomu ndiyo yakawanda yemamiriyoni ekushandisa. Iko mavhidhiyo ekudzidzisa maitiro, asiwo mafundo akanyorwa. Kuti uongorore unyanzvi hwako, mibvunzo yakawanda yekuzvisarudzira uye kudzvora kunoiswa panzvimbo.
Zvidzidzo zveFrench zvauchazokwanisa kutevera paOrdididact zvakakwana zvakakwana kukubvumira kuti usvike pazinga risingazogamuchirwi nemapelenzi uye mukukurukurirana kwakanyorwa. Chii chingawedzera unyanzvi hwepakutanga uye kure nekusafarirwa kusimbisa CV yako. Pasinei nehuwandu hwehutano hwako, uchawana zvidzidzo zvakagadzirirwa iwe. Saka munhu wese ndeyechokwadi kuti awane compte yake, zvisinei nokuti yakatanga sei.
Iko kunogona kubatsirwa mukugadzirira kweMutambo weVoltaire
Kana chirongwa chako chiri kutsigira unyanzvi hwako nekukunda chivhota cheVoltaire, usazeza. Izvi dhipuroma inokosha certifies zivo yako zvemberi nemitemo chiperengo uye girama wedu akapfuma French. Nzira yeOrdididact ichasangana newe uye ichakubatsira iwe kuzadzisa chinangwa chako kana uchida kutora dambudziko iri. Iko kune purogiramu yakakwana yekupedza iyi kuongorora uye iva nechokwadi chekubudirira maoko pasi. Zvipe akanakisisa wokukunda kuratidza mwero enyu akanaka muna French uye kuwedzera employable kupfuura vakwikwidzi dzenyu.
VERENGA Tsamba template kubvuma kana kuramba chiyero kubva kune chero account
Usatambise imwe yechipiri, uye tora iwo mukana wekuwana chinozivikanwa chitupa kupupura kune yako girama uye chiperengo ruzivo. Kubatira kwako kunongowedzerwa kakapetwa kagumi. Iwe hauna kana chaucharasikirwa nacho, saka wadii kuyedza iyo Orthodidact Nzira kuti uone kana iyi dzidzo yekumusoro yakakunakira iwe?
Usazomboitazve Chimwe Chinyorwa Chisipo neThe Orthodidact Method January 18th, 2021Tranquillus
pashureNzira Dzakashata Uye Misoro Yose!
zvinoteveraMharidzo: 4 Mazano Anokosha Okuziva Kubudirira